बार्सिलोनाले हुएस्कालाई ८-२ ले हरायो, मेसी र स्वारेजले गरे २-२ गोल ! - Everest Dainik - News from Nepal
बार्सिलोनाले हुएस्कालाई ८-२ ले हरायो, मेसी र स्वारेजले गरे २-२ गोल !
एजेन्सी । बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा सोसिडाड डिपोर्टिभा हुएस्कामाथि शानदार जित निकालेको छ। आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले नव प्रवेशी क्लब हुएस्कामाथि ८-२ अन्तरले हरायो ।
घरेलु मैदानमा बार्सिलोनालाई जिताउन लियोनल मेसी र लुइस स्वारेजले २-२ गोल गरे। यस्तै ओसुमाने डेम्बेले, इभान राकीटिच र जोर्डी अल्बाले समान १-१ गोल गरेका थिए। बार्सिलोनाले एक गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। हुएस्काका जोर्गे पुलिडोले आत्मघाती गोल गर्दा जुवान हर्नान्डेज र एलेक्स गाल्लरले १-१ गोल फर्काए। क्याम्पनाउमा बार्सिलोनाले सुरुवाती अग्रता उल्टाएर जित निकालेको हो।
याे पनि पढ्नुस टेभेज भन्छन्,- ‘मेसीले अहिल नै सन्यास लिदैनन्’
दोस्रो हाफमा बार्सिलोना थप आक्रमक बन्यो। ४८ औं मिनेटमा डेम्बेलेले गोल गर्दै खेललाई ४-२ को स्थितिमा पुर्‍याए। खेलको ५२ औं मिनेटमा राकीटिचले गोल गरेपछि बार्साको अग्रता५-२ पुग्यो। ६१ औं मिनेटमा मेस्सीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै बार्सिलोनालाई ६-२ को अग्रता दिलाए ।
याे पनि पढ्नुस मेसीको दाहिने हात भाँच्चियो, तीन साता आराम गर्नुपर्ने
त्यसपछि खेलको ८१ औं मिनेटमा अल्बा र ९० औं मिनेटमा स्वारेजले पेनाल्टीमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई ८-२ को जित दिलाए। यो जितसँगै बार्सिलोनाले लिगमा लगातार तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ।
जितपछि शीर्ष स्थानमा उक्लिएको बार्सिलोनाले ३ खेलबाट ९ अंक जोडेको छ। हुएस्काको यो पहिलो हार हो। हुएस्काले ३ खेलबाट ४ अंक जोडेको छ।
याे पनि पढ्नुस मेसीको बार्सिलोनाको लगातार जित, सोसिडा २-१ ले हार्‍यो
ट्याग्स: Footbller messi, Leonal Messi, messi and luis suarez